Blas Ruiz Grau. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Mors saga | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Blas Ruiz Grau. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Mors saga
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ajụjụ ọnụ, Ndị edemede, Black akwụkwọ
Blas Ruiz-Grau Ọ bụ otu n'ime ihe atụ kachasị mma nke onye edemede edepụtara n'onwe ya nke na-awụda ebe obibi akwụkwọ mba ma na-enwe ọganiihu ya. Na nkenke, ọ na-ewepụta aha ya ọzọ, Ọnwụ egbu egbu 2, edemede edemede na-eso nke ọ bipụtara na 2019 na psychopaths kacha njọ na akụkọ ntolite. Ma ihe kacha mara amara bụ nke ya saga nke Mors, nke mejupụtara Enweghị ụgha, Will gaghị ezu ohi y Not gaghị anwụ. Na nke a Ajụjụ ọnụ agwa anyị ntakịrị ihe niile. Ana m ekele gị nke ukwuu maka oge gị na obiọma ị nyere m.
Alicante si 84 amuru na Rafael, Blas Ruiz Grau n'onwe ya bipụtara akwụkwọ mbụ ya, Eziokwu ga - eme ka ị nwere onwe gị, na 2012. N'afọ sochirinụ ka ịga n'ihu ya, Amụma nke ndị mmehie, nke bu ire ahia oma. Na kryptos, aha ya nke atọ, etinyebere n'ọnọdụ nke abụọ nke ndị kacha ere ahịa na 2017, na Bọchị asaa nke ngagharị, kwenyesiri ike na ọ ga-aga. Na Ekwela ka onye ọ bụla metụ ihe ọ bụla aka!, edemede banyere akụkọ ifo na eziokwu nke ndị uwe ojii na usoro iwu ọhụụ, guzo dị ka akara aka na nchọpụta mpụ.
BLAS RUIZ GRAU - AJTERJ.
AKITKỌ DIT N'ITLỌ NCHE: Ì chetara akwụkwọ mbụ ị gụrụ? Na akụkọ mbụ ị dere?
BLAS RUIZ GRAU: Banyere akwụkwọ mbụ m nwere obi abụọ ma ọ bụrụ na ọ bụ otu n'ime Ndị Trotamusicians ma obu nke Asterix na Obelix. Ka o sina dị, dị ka nwatakịrị, enwere m mmasị n'ịgụ akwụkwọ ọchị na kwa izu m na-azụta ụfọdụ.
AL: Gịnị bụ akwụkwọ ahụ metụrụ gị n'ahụ na gịnị kpatara ya?
BRG: O juru m anya Nwamba ikpeazu. Echere m na ọ bụ oge mbụ m jikọtara ya na (otu n'ime nke a) isi agwa. Echere m na nke ahụ bụ isi ihe na-eme ka ịgụ akara gị.
AL: Onye edemede ma ọ bụ ndị edemede kachasị amasị gị? Nwere ike ịhọrọ n'ime oge niile.
BRG: Ugbu a ọ na-agba m ara Michael Santiago. Echeghị m na onye ọ bụla na-eme ya dị ka ya.
AL: Kedu ihe bụ isi okwu ma ọ bụ njirimara nke akwụkwọ akụkọ gị niile ma olee otu i chere na ị si malite kemgbe aha mbụ ị bipụtara?
'' BRG: Echere m na m mezuola ihe m kwuru n'elu, na ndị na - agụ akwụkwọ jikọtara ihe odide m ma nwee mmetụta ma bie ihe ọ bụla. Ana m elezi ihe ederede anya nke ọma ma anaghị m abanye n'ime ihe na-apụta. A ka na-echu m ụra, mana isi m na-agba gburugburu ka m nọ.
BRG: Nye onye nyocha Amaia salazarnke Dolores Redondo dere.
BRG: Niile gbachi nkịtị nke nwere ike.
BRG: Ugbu a ọ bụ mgbe ha na-ahapụ m.
AL: rarydị edemede ndị ọzọ kachasị amasị gị?
BRG: Enwere m mmasị na ya akwụkwọ akụkọ ihe mere eme.
BRG: Ma, n'ezie. Ọ bụ oge jọgburu onwe ya n'ozuzu n'ihi ọnọdụ a na-enwetụbeghị ụdị ya anyị na-agabiga, mana anyị ndị edemede kwesịrị ịghọta na, n'ebe ọrụ, anyị enweghị ike ime mkpesa n'ihi na a na-agụ ọtụtụ ihe ugbu a.
BRG: Eziokwu ezighi ezi. Achọghị m ikwu na e nwere saturation, na mgbe, ma ọ bụ eziokwu na e nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị edemede karịa ndị na-agụ akwụkwọ. Karịsịa, n'echiche nke ọtụtụ na-achọ ịgụ ndị na-ede akwụkwọ maka ha ma ọ na-esiri ha ike ịkọrọ ndị ọzọ ha amaghị. Nke ahụ na-ewute onye edemede mbụ ahụ ọtụtụ (amaara m, n'ihi na m gafere ya).
BRG: Ọ na-esiri m ike dịka ọ na-esiri onye ọ bụla. N'uche nke uche nke a bu bullshit, no more. N’ebe m na-arụ ọrụ, enweghị m ike ime mkpesa n’ihi na ejirila m okpukpu atọ rụọ ọrụ m. Ee n'ezie, na my novels, igaghi ahu ihe o bula nwere coronavirus Ma ọ bụ ihe ọ bụla myiri. Anaghị m achọ ka m kwuo ihe a n’akwụkwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Ajụjụ ọnụ » Blas Ruiz Grau. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Mors saga
Oge nke Imeghị Ihe
N'etiti abalị Sun